किन हुन्छ योनि बाहिरी छाला कालो ? कारण यस्तो छ - inaruwaonline.com
किन हुन्छ योनि बाहिरी छाला कालो ? कारण यस्तो छ
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पौष ०१, २०७३ समय: १५:१८:०६
१ पुस, काठमाडौं । प्रायःजसो महिलाहरुको शरिरको छालाभन्दा योनिको बाहिरी छाला फरक हुन्छ । महिलाहरु आफ्नो शरीरको रङसँग योनी बाहिरको छाला किन कालो भएको होला भनेर सोच्ने गर्दछन् । योनीको छाला कालो हुनु र अन्य कुराहरुमा केही सम्बन्ध हुन्छ कि भन्ने उनीहरुको चासो हुन्छ । यौनसम्पर्क गरेर कालो भएको कतिपयले महिलाहरुको सोचाई हुन्छ । तर के यी सोचाईहरु साँचो हुन त ? पुरुषको लिङ् र योनीको बाहिरी छाला किन कालो हुन्छ ? जानौं यसबारेमा ।
अनुहारको छालाको रङ्ग श्रृंगार गरेर परिवर्तन गरेजस्तै भंगक्षेत्रको रङ्ग परिवर्तन गर्ने एक सजिलो उपाय श्रृङ्गार गर्नु हो, तर अनुहारजस्तो यसलाई देखाएर हिँड्नु नपर्ने भएकाले यसको रङ्ग परिवर्तन गर्नु तथा रङ्गका बारेमा चिन्ता लिनु आवश्यक छैन। शंका लागे चिकित्सकसँग परीक्षण गराउनु बेस नै हुन्छ छ ।टिभि अन्नपुर्णबाट